Diiwaanka Skipper (Katalogi Koorso) - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
Dugsiga Sare ee 'Minnetonka High School Katalogi' liistada liistada Koofi ee Kooban waxaa ku jira faahfaahin ku saabsan koorso kasta. Waa kuwan qoraalo waxtar leh:
Ka raadi liis koorso daabacan oo daabacan (PDF) bog kasta oo waax ah. Waxaad sidoo kale dib u eegi kartaa wadiiqooyinka manhajka ee ay bixiyaan waaxaha qaarkood.
Soo dejiso Xaashida Qorshaynta Diiwaangelinta oo ku dheji Awood la'aanta inaad bilowdo koorsooyinka khariidaynta sanadka soo socda.
Sida had iyo jeer ah, haddii aad su'aalo ka qabtid qorshahaaga waxbarasho ee dugsiga sare iyo yoolalka dugsiga ka dambeeya, fadlan eeg La-Taliyahaaga MHS ama La-Taliyaha Kulliyadda Phil Trout ee Kulliyadda iyo Xirfadda Xarunta.
Casharka Fiidiyowga: Sida Loo Isticmaalo Skipper Log
Darajooyinka Miisaanaysan ee Koorsooyinka Heerka Sare
NCAA Qaybta I / II U-Qalmitaanka Ardayda-Ciyaaraha
Dhibcaha iyo DHAGAX / FASHILAN
Barashada Madaxbanaanida Tacliinta
Fursadaha kale ee Amaahda: UMTYMP, SouthWest Metro Intermediate, iwm.
Baahiyaha Gaarka ah iyo Adeegyada
Codsiyada isbeddelka jadwalka waxay u baahan yihiin "Foomka Codsiga Isbeddelka Tacliinta" oo laga heli karo xafiiska la-talinta. Dhammaan codsiyada waa in la soo gudbiyaa ka hor bilowga simistarka. Ardayda doonaya inay ka baxaan koorso waa inay ku codsadaan afarta toddobaad ee ugu horreeya koorsada simistarka. Ardaydu kama dhici karto inay ka hooseeyaan culeyska koorsada ugu yar ee loo baahan yahay. Dhammaan isbeddelada heerka tacliimeed waa in la dhammaystiraa dhammaadka usbuuca afraad ee semester kasta illaa uu macallin ku taliyo mooyee.
Dugsiga Sare ee Minnetonka wuxuu bixiyaa in kabadan 300 oo koorso. Waaxyo badan ayaa bixiya fasalo heerar kala duwan ee awooda ardayga ah. Sababtoo ah diyaargarowga ugu sarreeya ee ardayda Minnetonka ay ka helaan dugsiga hoose iyo dhexe, ardayda badankood waxay muujiyeen karti ka sarreysa celcelis ahaan marka la barbar dhigo xeerarka qaranka waxaana loo diyaariyey koorsooyin heer sare ah oo ku saabsan dhinacyada xoogga tacliinta iyo xiisaha. Fasaladihii ugu dambeeyay ee qalinjabinta MHS, ardayda BADAN (uguyaraan 84%) waxay dhameystireen uguyaraan hal meelaynta Hormarka (AP) ama International Baccalaureate (IB) oo qayb ka ah qorshahooda afarta sano ah. Ardayda isu diyaarinaya kuleejka waxaa lagu dhiirigelinayaa inay tixgeliyaan koorsooyinka heerka sare ah; kulleejooyinka xulashada leh waxay filayaan in la qoro koorsooyin dardar leh (Maamuus), AP ama IB. Faa'iidooyinka isqorista koorsooyinkan waxaa ka mid ah:
Ku celcelin yar oo walxaha horey loo bartay
Dood-wadaag qoto dheer
Amaah jaamacadeed oo macquul ah
Diyaarinta kuliyada oo xoogan iyo codsi kulleejo oo tartan badan leh
Sharaxaad ku saabsan koorsooyinka heerka sare ah ayaa la siiyaa kulliyadaha iyo jaamacadaha oo ay weheliyaan qoraalka ardayga. Liiska koorsada, "Maamuusta" waxay muujineysaa in koorsada loogu talagalay in loogu diyaariyo ardayda koorsooyinka AP iyo IB.
Darajooyinka Miisaanka Leh. Nidaamka Degmo kasta, dhammaan koorsooyinka AP iyo IB waa la miisaami doonaa +1.0 haddii ardaygu kasbado C- ama ka sareeya, koorsooyinka waxaa lagu go'aamiyay inay buuxiyaan heerarka qalafsanaanta ee degmadu dejisay, ardayguna wuxuu si guul leh ku gaaraa "3" ama sare ee koorsooyinka Meelaynta Sare ama "4" ee qiimeynta caalamiga ah ee 'Baccalaureate'. Koorsooyinka ka baxsan adkaanta AP iyo IB (koorsooyinkan waxaa ka mid ah Kala-badalka Kala-beddelka, Isleegyada kala-geddisan, Cilmi-baarista I iyo II, Isbaanishka iyo Sharafeedyada Shiinaha), ardaydu waa inay kasbadaan C- ama ka sarreeya koorsada oo ay gaaraan C- ama ka sareeya imtixaanka dhamaadka-koorsada si loo helo darajo miisaan leh.
Ardayda ka diiwaangashan koorsooyinka adag ee waxbarashada, sida AP ama IB waa inay weli la kulmaan Heerarka Gobolka Minnesota ee waxbarashada dhammaystiran. Sharciga gobolku wuxuu siiyaa guddiyada iskuulada deegaanka awood inay siiso koorso adag oo ka dhaafida waxbarashada ah ee ardayda buuxisa shuruudaha qaanuunka.
Si loogu tixgeliyo u qalmida machadka Qeybta I iyo in looqalmo kaalmo dhaqaale, tababar, iyo tartan sanadka ugu horeeya, ardaygu waa inuu buuxiyaa shuruudaha soo socda ee koorsooyinka asaasiga ah:
16 Xeerka Koorsada Koowaad
4 sano oo Ingiriis ah
3 sano oo xisaab ah (Aljabra I ama ka sareeya)
2 sano oo cilmiga dabiiciga ah / jirka ah (1 sano oo sheybaar ah haddii uu bixiyo
1 sano oo dheeri ah oo Ingiriis, xisaab ama dabiici ah / saynis jireed
2 sano oo cilmiga bulshada ah
4 sano oo koorsooyin dheeri ah (laga bilaabo aag kasta oo kor ku xusan, luuqad qalaad ama diin / falsafad aan caqiido ahayn)
3 sano oo ingiriis ah
2 sano oo xisaab ah (Aljabra I ama ka sareeya)
3 sano oo Ingiriis ah oo dheeri ah, xisaabta ama sayniska dabiiciga / jirka
Ujeeddooyinka buuxinta shuruudaha manhajka aasaasiga ah, "koorsada aasaasiga ah" waxaa qeexaya NCAA Bylaw 5-1 (j) oo ah koorso tacliimeed oo la aqoonsan yahay oo loogu talagalay in lagu diyaariyo arday heer jaamacadeed shaqo ka soo horjeedda koorso xirfadeed ama adeeg shaqsiyeed. Dhammaan koorsooyinka muhiimka ah ee Tonka Online waa NCAA la oggolaaday.
Koorsooyinka lagu baray heer ka hooseeya heerka waxbarashadda tacliimeed ee caadiga ah ee dugsiga sare (tusaale, hagaajinta, waxbarashada gaarka ah ama magdhow) looma tixgelin doono inay yihiin koorsooyin asaasi ah iyadoo aan loo eegin koorsada ay ka kooban tahay. Xafiiska la-talinta wuxuu hayaa liis ah “koorsooyin asaasi ah” oo ay ansixiyeen Xarunta U-Qalmitaanka Bilowga ah ee NCAA.
SAT / ACT: NCAA sidoo kale waxay ubaahantahay dhibcaha SAT ama ACT si ay ugaqeybqaataan cayaaraha fudud ee kulleejada koowaad iyo II.
PASS / FASHIL: Haddii aad qorsheyneyso inaad kaqeybqaadato Ciyaaraha fudud ee kulleejada Qaybta I ama Qeybta II, ogow in koorsooyinka la siiyay ku guuleysiga / guul darada loo meeleyn doono fasallada ugu hooseeya ee ay ka gudbaan Dugsiyada Sare ee NCAA. Ardaydu waa inay garwaaqsadaan mar alla markay iska diiwaangeliyaan nidaamkan qiimeynta, inaysan beddeli karin nidaamyada inta lagu jiro koorsada iyadoon macallinku oggolaan.
Ardayda waqtiga-buuxa ah waa in laga diiwaangeliyo ugu yaraan lix (6) dhibcaha fasalada sagaal iyo toban, uguyaraan shan (5.0) dhibcaha fasalada kow iyo tobnaad iyo laba iyo toban, oo leh tiro ku filan oo dhibco ah si loogu gudbo qalinjabinta.
Ardayga si guul leh ku dhammeeya koorsada dugsiga sare wuxuu heli doonaa buundada koorsada labaad oo dhibcaha ayaa loo xisaabin doonaa xagga shuruudaha qalin-jabinta ardayga.
Koorsooyinka tooska ah ee Tonka waxay kasbadaan .5 dhibcood, oo loo xisaabiyo qalin-jabinta. Ma jiraan wax lacag ah oo loogu talagalay Tonka Online oo lagu qaado culeyska koorsada lix-amaahda caadiga ah. Khidmadaha ayaa la dalban doonaa ardayda raba inay kordhiyaan fursaddooda iyagoo ku daraya fasal toddobaad ama qaadanaya fasal xagaaga iyadoo loo marayo Tonka Online.
WADAAD / FASHILAN
Ikhtiyaarka PASS / FAIL waxaa loogu talagalay duruufaha shaqsiyadeed ee aan caadiga ahayn waxayna u baahan yihiin oggolaanshaha maamulaha dugsiga. Haddii arday uu qaadanayo koorsada PASS / FASHIL, ardaygu waa inuu haystaa shaqo gudub ah si uu u helo dhibcaha koorsada. Dhammaan ardayda "Pass / Fail" ee koorso kasta waxay qaadan doonaan dhammaan imtixaannada oo waxay u wareejinayaan shaqada fasalka caadiga ah iyo ardayda kale. Fasal loo qaaday qaab “Pass / Fail” ah ma saamayn doono celceliska buundada ardayga ama istaagga maamuuska. Haddii ardaygu ka gudbo fasalka, ardaygu wuxuu heli doonaa "P" iyo dhibco simistar buuxa oo ku saabsan kaarkiisa warbixinta / fasalka ee fasalkaas. Haddii ardaygu ku dhaco fasalka, ardayga ayaa markaa ka heli doona "F" kaadhka warbixinta. Ardaygu wuxuu heli karaa oo keliya hal koorso oo ah 'PASS / GUIL' sanadkiiba marka laga reebo xaaladaha aan caadiga ahayn sida uu go'aamiyo maamulaha dugsiga.
Ciyaartooyda Feejignaanta : Haddii aad qorsheyneyso inaad kaqeyb gasho Ciyaaraha fudud ee kulleejada Qaybta I ama Qeybta II, ogow in koorsooyinka la siiyay ku guuleysiga / guuldareysiga loo diri doono fasallada ugu hooseeya ee ay ka gudbaan Dugsiga Sare ee NCAA. Ardaydu waa inay garwaaqsadaan mar alla markay iska diiwaangeliyaan nidaamkan qiimeynta, inaysan beddeli karin nidaamyada inta lagu jiro koorsada iyadoon macallinku oggolaan.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay inuu awood u siiyo ardayda inay kasbadaan dhibco daraasad madax-bannaan oo qancin doonta shuruudaha qalin-jabinta ee loo baahan yahay maado. Daraasadda madaxbannaan waxay barbar socon doontaa manhajka koorsada dugsiga sare, laakiin hababka waxbarashadu way ka duwanaan karaan oo waaya-aragnimadu waxay ka dhici doontaa fasalka dibadiisa. Ardaydu waa inay la xiriiraan Isuduwaha Waxbarashada Sare ee foomamka dalabyada iyo macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan barnaamijka si loo arko haddii qorshe u qalmo.
Ikhtiyaariyada Isdiiwaangelinta Dugsiga Sare kadib (PSEO) waa barnaamij u oggolaanaya ardayda fasalada 10, 11 iyo 12 inay kasbadaan dhibcaha dugsiga sare iyo kuleejka intay weli ku jiraan dugsiga sare iyada oo loo marayo isqorista iyo ku guuleysiga dhammaystirka koorsooyinka aan kuliyadaha ahayn ee kulleejooyinka xaq u leh ee ka dambeeya dugsiga sare.
Inta badan koorsooyinka PSEO waxaa lagu bixiyaa xerada dugsiga sare. Koorsooyinka qaarkood waxaa lagu bixiyaa khadka tooska ah. Kuleej kasta ama jaamacad kasta oo kaqeybgalaya waxay dejisaa shuruudaha gelitaanka ee u gaarka ah ee isqorista koorsooyinka PSEO. Ardayda fasalka kow iyo tobnaad iyo laba iyo tobnaad waxay qaadan karaan koorsooyinka PSEO waqti buuxa ama waqti dhiman ah. Ardayda fasalka tobnaad waxay xaq u leeyihiin inay iska diiwaangeliyaan PSEO si xadidan oo xadidan. Ardaydu waa inay buuxiyaan deganaanshaha iyo shuruudaha u-qalmitaanka PSEO isla markaana u hoggaansamaan xadka kaqeybgalka ee ku qeexan Xeerarka Minnesota, qeybta 124D.09. Haddii degmo dugsiyeed ay go'aamiso in ardaygu aanu ku socon wadadii qalin-jabinta, ardaygu wuu sii wadi karaa ka-qaybgalka PSEO ee ku-meel-gaadhka ah.
Markay tahay Maarso 1 ee sannad kasta, ama saddex toddobaad ka hor taariikhda ardaygu isdiiwaangaliyo koorsooyinka sannad dugsiyeedka soo socda, dugsiyadu waa inay siiyaan macluumaadka PSEO dhammaan ardayda ku jirta fasallada 8-11 iyo qoysaskooda. Si looga caawiyo degmada qorshaynta, ardaygu waa inuu ku wargaliyaa degmada ugu dambayn May 30 ee sannad kasta ujeedadooda inay iska diiwaangeliyaan koorsooyinka dugsiga sare ka dambeeya inta lagu jiro sanad dugsiyeedka soo socda
Minnetonka wuxuu ku siiyaa macluumaadkan shabakada ' Skipper Log ' iyo siminaarada la-taliyayaasha ee lala yeesho waalidiinta iyo ardayda, ka hor diiwaangelinta sannad kasta.
Ma jiraan wax lacag ah oo laga qaadayo ardayda PSEO ee ku saabsan waxbarashada, buugaagta ama ujrada waxyaabaha looga baahan yahay inay ka qayb galaan koorso. Si kastaba ha noqotee, ardaydu waxay la kulmi karaan lacag ujro ah qalab noqda hantidooda marka koorsada ama barnaamijka la dhammeeyo, buugaagta aan dib loogu celin xarunta dugsiga sare sida ku xusan siyaasadooda, ama kharashka waxbarashada haddii aysan ku wargelin degmada 30-ka May iyo degmadu kama tanaasuli doonto taariikhdan loo baahan yahay.
Lacag ayaa la heli karaa si looga caawiyo bixinta kharashaadka gaadiidka ardayda uqalma inay kaqeybqaataan koorsooyinka PSEO ee kuleejooyinka jaamacadaha Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan lacagtaan, ka hel Tilmaamaha Barnaamijka Bixinta Lacag-celinta ee PSEO .
Isqorista koorsada PSEO kama mamnuucayo arday inuu kaqaybqaato waxqabadyada uu kafaalo qaaday dugsiga sare. Dugsiyada Minnetonka waxay u oggolaan doonaan ardayda PSEO inay si macquul ah u galaan dhismaha dugsiga sare, kombuyuutarrada iyo / ama agabyada kale ee teknoolojiyadda inta lagu jiro saacadaha caadiga ah ee dugsiga si ay uga qaybgalaan koorsooyinka PSEO, ha ahaato khadka tooska ah ama xerada.
Siyaasadeena miisaanka darajada Degmooyinka waxaa lagu daabacay websaydhka. Ardaydu waxay ku kasban karaan buundooyin miisaan leh koorsooyinka Minnetonka AP iyo IB iyo koorsooyinka ka sarreeya AP iyo IB. Fadlan hubi Skipper Log wixii macluumaad ah ee ku saabsan koorsooyinka MHS.
Dhammaan koorsooyinka lagu qaatay barnaamijka PSEO waa inay buuxiyaan shuruudaha qalin-jabinta. Degmooyinka waa inay soo gudbiyaan dhibcaha laga kasbaday PSEO iyadoo loo eegayo saamiga lagu qeexay sharciga. Degmooyinku waxay awood u leeyihiin inay go'aamiyaan maadada iyo heerarka koorsada PSEO ay buuxiso. Haddii uu jiro khilaaf u dhexeeya degmada iyo ardayga oo ku saabsan tirada dhibcaha la siiyay koorso gaar ah, ardaygu wuxuu rafcaan ka qaadan karaa go'aanka guddiga guddoomiyaha. Go'aanka gudoomiyaha ee ku saabsan tirada dhibcaha ayaa noqon doona kama dambaysta.
Hay'adaha ka dambeeya dugsiga sare waxaa looga baahan yahay inay u oggolaadaan ardayda PSEO inay iska diiwaangeliyaan koorsooyinka khadka tooska ah ee waafaqsan nidaamka siyaasadeed ee hay'adda ee ku saabsan isqorista ardayda dugsiga sare kadib ee koorsooyinka internetka.
Ardayda fasalka tobnaad waxay marka hore iska qori karaan hal koorso oo ah Xirfadaha iyo Tacliinta Farsamada (CTE) PSEO haddii ay helaan dhibco aqoon aqrinta ah "kulmaya" ama "ka badan" fasalka 8-aad ee MCA. Haddii 10 fasalka th qaadashada CTE PSEO a dabcan kasban ugu yaraan darajada C a fasalka in, waxay qaadan kartaa koorsooyin CTE PSEO dheeraad ah. Haddii ardaygu uusan qaadan MCA fasalka 8- aad , qiimeyn kale oo akhris oo ay aqbashay hay'adda dugsiga sare dhigata ayaa la beddeli karaa. Ardayda naafada ah, waxaa jira ikhtiyaar kale oo lagu muujiyo aqoonta aqrinta.
Macluumaadka hadda ku saabsan barnaamijka PSEO, booqo Websaydhada Diiwaangelinta Dugsiyada Sare ee Waaxda Waxbarashada ee Minnesota (PSEO) .
Jaamacadda Minnesota ee Xisaabta Barnaamijka Xisaabta Dhallinyarada (UMTYMP)
UMTYMP waa barnaamij la dedejiyay oo loogu talagalay ardayda dhigata fasalada 6 -12 kuwaa oo go aan ku leh xisaabta. Koorsooyinka aadka loo dardargeliyay waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu siiyo ardayda khibrad tacliimeed oo xoog leh oo kicisa xiisahooda xisaabeed iyo awoodooda. UMTYMP waxaa lagu bixiyaa Xarunta Xisaabta ee Iskuulka Jaamacadda Minnesota ee Barnaamijyada Waxbarashada (MathCEP), ardayduna waa inay ku imtixaanaan barnaamijka. Ardayda dhigata UMTYMP waxay ku kasbadaan buundooyinkooda xisaabta qalin-jabinta dugsiga sare barnaamijkan. Wixii macluumaad ah ee ku saabsan UMTYMP iyo imtixaanka u qalmidda, kala tasho websaydhka http://mathcep.umn.edu/umtymp/ ama wac xafiiska MathCEP oo ah 612-625-2861.
Xarunta MN ee Waxbarashada Farshaxanka Dugsiga Sare ee Dadweynaha
Dugsiga Farshaxanka waa mid gaar ah, oo gobolka oo dhan ah, oo aan lacag-la'aan aheyn dugsi sare oo dadweyne. Waxay bixisaa barnaamijyo farshaxan oo degdeg ah oo ku saabsan qoob ka ciyaarka, farshaxanka suugaanta, farshaxanka warbaahinta, muusikada, tiyaatarka, iyo farshaxanka muuqaalka oo ay weheliso daraasado guud oo xoog leh. Codsiyada waxaa laga aqbalaa dhammaan ardayda dhigata fasallada 10aad iyo 11aad ee Minnesota ee raba inay codsadaan sannad dugsiyeedka soo socda. Xilliga kama dambaysta ah ee codsigu waa Febraayo 1 ee sannadka ka horreeya sannad-dugsiyeedka codsigiisa la sameeyo. Isqoristu way xadidan tahay. Fadlan la xiriir la-taliyaha wixii macluumaad dheeraad ah.
Ardayda qorshaynaysa inay soo gudbiyaan shaqada koorsada ee lagu qabtay goob aan ahayn Dugsiga Sare ee Minnetonka ee buundada qalinjabinta MHS waa inay kala tashadaan la-taliyahooda tilmaamaha xukumaya aqbalaadda buundadan oo kale.
Koorsada Koorsada ee Barashada Hore
Ardaydu way tijaabin karaan koorsooyin kasta oo laga bixiyo Dugsiga Sare ee Minnetonka waxayna helayaan dhibco maaddo kasta hadey ardaygu awoodo inuu muujiyo aqoonta manhajka koorsadaas. Codsiga Dhibcaha ee Qiimaynta ayaa dhici karta rubuc ka hor bilowga fasalka ama ugu dambayn saddex toddobaad koorsada. U arag la-taliyahaada foomamka dalabka iyo macluumaad faahfaahsan oo dheeri ah.
Xarunta Waxbarashada Aagga – Daraasad Madaxbanaan
Daraasadda Madaxa Banaan waa barnaamij ay dowladdu xaqiijisay oo loogu talagalay ardayda jirta 16 sano ama ka weyn ee dib uga dhacay qorshahoodii qalin-jabinta. Ardaydu waxay la kulmaan usbuucii hal mar macalimiintooda waxayna dhameystiraan shaqooyinka waqtigooda (koorsooyinkan waxaa sii dheer jadwalka joogtada ah ee ardayga). Ka eeg la-taliyayaasha wixii macluumaad dheeraad ah.
SouthWest Metro Dhexdhexaad
Southwest Metro Intermediate District ee Chaska, Minnesota, waxay bixisaa shaqooyin iyo koorsooyin farsamo oo ka baxsan kuwa laga heli karo MHS. Fadlan la tasho lataliyahaaga Dugsiga Sare ee Minnetonka haddii aad su'aalo qabto.
Ardayda naafada ah ee la xiriira maqalka, aragga, hadalka, dhaqdhaqaaqa jirka, ama kuwa naafada ah ee la xiriira barashada ama baahida bulshada, shucuurta, ama dabeecadda ah waxay xaq u yeelan karaan adeegga waxbarashada gaarka ah ka dib qiimeyn lagu ogaanayo u-qalmitaanka iyo baahida. Ardaydu iskama diiwaan gelin karaan adeegyadan; isqoristu waa go'aan kooxeed waxayna ku saleysan tahay natiijooyinka qiimeynta. Barnaamijyada u qaadaya dhibco qalin jebinta waxaa ka mid ah koorsooyin kale oo ka mid ah Xarunta Waxbarshada oo ay ka mid yihiin: barashada xirfadaha aasaasiga ah ee akhriska, qorista, higgaadinta, xisaabta, barista xirfadaha fulinta fulinta (abaabulka, maaraynta waqtiga, xirfadaha barashada), hagida habdhaqanka iyo xeerarka shucuurta , xirfadaha bulshada iyo hagaajinta isdhexgalka asxaabta, iyo qorsheynta kala guurka ee barnaamijyada dugsiga sare kadib. Adeegyada waxbarashada gaarka ah sidoo kale waxaa ka mid noqon kara hadalka iyo luqadda, la qabsiga waxbarashada jimicsiga iyo barnaamijyada shaqada.
Xarunta Waxbarshada - Fasalada: 9-12 - Dhibcaha Sida Loo Habeeyey
U-qalmitaanka ardayga ee waxbarashada gaarka ah waxay ku saleysan tahay nidaamka qiimeynta ka dib marka tixraac la sameeyo. Barnaamijka waxaa loogu talagalay in lagu daboolo baahida ardayga shaqsiyeed. Tan waxaa ka mid ah: caawimaadda shaqooyinka caadiga ah, barashada xirfadaha barashada, tilmaamidda dhinacyada xirfadaha aasaasiga ah ee akhriska, qorista, higgaadinta, xisaabta, hagida habdhaqanka iyo hagaajinta shucuurta ee la tacaalida arrimaha dhallinta iyo hagaajinta isdhexgalka asxaabta, iyo qorsheynta kala-guurka ee dugsiga sare kadib barnaamijyada. Waxbarashada gaarka ah sidoo kale waxaa ku jira adeegyada hadalka iyo luqadda.
Barnaamijka COMPASS - Fasalada 9-12
Ujeedada udub-dhexaadka iyo diiradda COMPASS waa inay siiso taageero ardayda shaqsi ahaan iyo tacliin ahaanba. Qeyb weyn oo ka mid ah gaaritaanka yoolkan ayaa ah in laga caawiyo ardayda inay dhisaan xirfadaha ay u baahan yihiin si ay ula kulmaan caqabadaha shaqsiyadeed, noqdaan kuwo u dooda, kor u qaadida isku kalsoonaanta, hagaajinta xirfadaha waxbarashada, dhammaystirka shaqada tacliimeed iyo qorsheynta mustaqbalka. Himilada 'COMPASS' waa inay ku hagto ardaydeena sida ugufiican ee ay wax uqaban karaan iyadoo la horumarinayo xirfadaha lagama maarmaanka u ah adduunka ee ka baxsan Dugsiga Sare ee Minnetonka. Si loo gaaro himilooyinkaas ardayda waxaa la siiyaa jawi dabacsan oo taageero leh halkaasoo ay ku loolamayaan manhajka guud. Tirada fasallada ayaa ku kooban 15 arday halkii fasalba; kuwa kale ayaa laga yaabaa in lagu daro liiska sugitaanka.
ELL (Bartayaasha Luqadda Ingiriisiga)
Ardaydu waxay u qalmi karaan fasallada ELL-ka iyaga oo oggolaansho ka haysta waaxda ELL. Barnaamijkan waxaa loogu talagalay ardayda afkooda koowaad uusan aheyn Ingiriis isla markaana aqoontooda Ingiriisiga ay adkeyneyso inay ku qabtaan fasal guud. Ardayda waa la imtixaamay waxaana lagu qori karaa hal ilaa saddex fasal. Dhammaan ardayda ELL waxay kaloo qaataan fasalo guud. Dhammaan fasallada ELL waxay bixiyaan waxbarid afarta aag aasaasi ah: ku hadalka, akhriska, dhageysiga, iyo qorista. Ka eeg ELL Webpage wixii macluumaad dheeraad ah.
U adeegida ardayda si wanaagsan iyo ku dhiirrigelinta inay gaaraan heerarkooda ugu sarreeya ee shaqsiyan iyo hanashada tacliimeed waa nuxurka rabitaankeenna ah inaan noqono dugsi sare oo heer caalami ah. Dhamaadka dhamaadka, dhammaan khibradaha barashada, bixinta manhajka, barnaamijyada dheeriga ah, fursadaha kobcinta, moodellada shaqaalaha, qaabeynta xarunta iyo adeegsiga, iyo waxqabadyada manhajka wadajirka ah waxay taageeri doonaan guusha ardayga iyo waxbarashadiisa oo dhan.
- Aragtida Gudiga Dugsiga Minnetonka